Faahfaahin booqashadii madaxweynaha Jibuuti uu ku tagey Muqdisho(Sawiro) – SBC
Faahfaahin booqashadii madaxweynaha Jibuuti uu ku tagey Muqdisho(Sawiro)
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta sidii wararkii hore aad kula socoteen wuxuu sodcaal ku tagey magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, waxaa safarkiisa ku wehliyey xubno ka mid ah dawladiisa, iyadoo sidoo kale madaxweynaha Jibuuti uu soo gaarsiiyey Muqdisho deeq raashin ah oo xukuumadiisu ugu tala gashay shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen.
Ismaaciil Cumar Geelle waxaa garoonka diyaaradaha si diiran ugu sameeyey madaxda dawlada KMG oo uu horkacayey Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaana salaan sharaf uu ka qaatey Geelle cutubyo ka mid ah ciidamada bambaadeyda ee Booliiska Soomaalida kuwaasi oo halkaasi ka tumay astaanka qaranka ee Soomaaliya & Jibuuti.
Mr Geelle markii uu ka soo ambabaxay garoonka diyaaradaha Muqdisho wuxuu booqdey xeryaha ay ku jiraan dadka barakacay ee abaaraha saameeyeen gaar ahaan xerada Badbaado oo ay ku jiraan barakacayaasha ugu badan, intii uu booqanayey goobahaasi wuxuu u jeediyey dadka xeryahaasi ku jira in dawlada Jibuuti ay garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweynaha Jibuuti wuxuu booqdey xarunta wasaarada warfaafinta dawlada KMG gaar ahaan xarunta Radio Muqdishu & Telefishinka qaranka.
Madaxweynaha Jibuuti markii uu soo dhameyswuxuu kulan kula qaatey xarunta madaxtooyada madaxda dawlada oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamanka & Ra’isalwasaaraha, waxaana kulankaasi lagu soo qaaday arimihii ugu dambeeyey ee isbadalada magaalada Muqdisho gaar ahaan ka bixidii Shabaabka.
Kulamadaasi ka dib madaxweynaha Jibuuti wuxuu ka ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo u kicitay wadankiisa.